♪ MPT က DATA အပို နှစ်ဆထပ်ဆောင်းပေးမည့် လစဉ်အင်တာနက် အစီအစဉ်နှင့် DATA PACK အသစ်နှစ်ခုကို မိတ်ဆက် ♫ ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
♪ MPT က DATA အပို နှစ်ဆထပ်ဆောင်းပေးမည့် လစဉ်အင်တာနက် အစီအစဉ်နှင့် DATA PACK အသစ်နှစ်ခုကို မိတ်ဆက် ♫
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Wednesday, July 13, 2016 IT, News No comments
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) သည် အင်တာနက် သုံးစွဲသူများပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် လက်ရှိ အင်တာနက် Package များအတွက် Data အပိုနှစ်ဆ ထပ်ဆောင်း ပေးမည့် အစီအစဉ် နှင့် Data Pack အသစ်နှစ်ခုတို့ကို ယခု ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးသော ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်အလျောက် ယခုအခါတွင် MPT ၏ ၀န်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသူပေါင်း သန်း၂၀ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ အစဉ်အဆက်အားပေးခဲ့သော သုံးစွဲသူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်လည်း MPT မှ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အမြဲဆန်းသစ် တီထွင်မှုများ ပြုလုပ်နေသည့်အပြင် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များ၊ အထူးဆုများလည်း ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။
ယခု ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်အရ MPT ၏ ဆွေသဟာအစီအစဉ်ရယူထားသော Prepaid, Postpaid GSM နှင့် WCDMA သုံးစွဲသူများသည် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အင်တာနက် Package များအတွက် အင်တာနက် Data အပိုနှစ်ဆ ထပ်ဆောင်း သုံးစွဲခွင့်များကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ Package ဈေးနှုန်းများကိုလည်း တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲ မူလအတိုင်းပင် ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် MPT က သုံးစွဲသူများအတွက် နေ့စဉ်ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မည့် 24 Hour Pack နှင့် Monthly Pack ဟူ၍ Data Pack အသစ်နှစ်ခုကိုလည်း စတင်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုမိတ်ဆက်လိုက်သည့် အစီအစဉ်များအရ အင်တာနက် Package များကို 1 MB လျှင် ၂.၅ ကျပ် နှုန်းဖြင့် အနည်းဆုံးထားပြီး ၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Koichi Kawase က MPT သည် အစဉ်အမြဲအားပေးခဲ့သည့် သုံးစွဲသူများအား တန်ဖိုးထားလေးစားသောအားဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အပိုဆု အစီအစဉ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖန်တီးပေးကာ မေတ္တာတုံ့ပြန်လျက်ရှိသည် ဟုပြောပါသည်။ “တည်ငြိမ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်နဲ့ Data အမြန်နှုန်းတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သန်း ၂၀ သော သုံးစွဲသူတွေဆီက အင်တာနက်အသုံးပြုနှုန်းတွေ မြင့်တက်လာနေတာကို သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်အသစ်တွေ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ data pack တွေကို အမြဲဖန်တီးဖော်ထုတ်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်” ဟု ပြောပါသည်။
လက်ရှိအင်တာနက် Package တွင် အပို နှစ်ဆထပ်ဆောင်းပေးမည့် လစဉ်အင်တာနက် data နှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စုစုပေါင်းရရှိမည့် data ပမာဏ
400 MB + 400 MB
Dial* 2002# OR SMS <400MB> to 1332
Dial* 2003# OR SMS <1GB> to 1332
5 GB + 5GB
Dial* 2005# OR SMS <5GB> to 1332
400MB ၀ယ်ယူပါက ယခင်က 150MB သာ အပိုဆောင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ယခု ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်အရ 400MB ၀ယ်ယူလျှင် အပိုထပ်ဆောင်း 400MB၊ 1GB ၀ယ်ယူလျှင် အပိုထပ်ဆောင်း 1GB နှင့်5GB ၀ယ်ယူလျှင် အပိုထပ်ဆောင်း 5GB တို့ကို မူလနှုန်းထားဖြင့်သာ Data အပိုနှစ်ဆ ရယူ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အသစ်မိတ်ဆက်မည့် အင်တာနက်အစီအစဉ်နှစ်ခု၏ နှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
Dial* 2001# OR SMS <120MB> to 1332
New Monthly Pack
2 +2GB
Dial* 2004# OR SMS <2GB> to 1332
24 Hour Pack သည် အင်တာနက်ပုံမှန်အသုံးပြုသူများအတွက် သင့်လျော်ပြီး တစ်နေ့ချင်းအလိုက် ၀ယ်ယူရမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ၀ယ်ယူသည့်အချိန်မှစ၍ ၂၄ နာရီပြည့်လျှင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ် ပါသည်။ Monthly pack မှာ စတင်ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ (၁) + (၂) + (၃) + (၄)
ဘယ်ချိန်မှာ နားထောင်နားထောင် မရိုးနိုင်တဲ့ သီချင်းလေးတွေမို့ ထပ်ပြီး စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်... နှစ်သစ်မင်္ဂလာ (၁) 01 - နှစ်သစ်မင်္ဂ...
ယူနီကော့(Dog Food)အခန်းအလုပ်သမားများမှ AACရုံခန်းေ...
မဟာချိုင်ပက်ဘော်နာနတ်သီးစက်ရုံက ဖမ်းဆီးခံရပြီး အ ခ...
အလုပ်နေ့စဉ်မရှိ လုပ်အားခနှစ်လစာ မရသေးတဲ့လပ်ဘူရီ ခရ...
AAC မှကိုရဲမင်းက ဖြစ် စဉ်ကိုရှင်းပြထားတာပါ။ (အလုပ်...
မြန်မာ MoU လုပ်သား ၁၃၉ ဦးကျော်လမ်းဘေးရောက်နေ ပြန်...
မဟာချိုင်ဝက်ကံရပ် TUNA ငါးသေတ္တာရုံမှ ၁၄ ရက်နေ့က အလ...
AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဟာ NGO မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အဖ...
မြန်မာလုပ်သားတစ်ဦးကို ထိုင်းလူမျိုးအလုပ်ရှင်သဌေး ...
Flower park မေမြို့ မိုးရာသီပန်းမြို့တော်
♪ လူတစ်ရပ်စာအမြင့်ကနေပြုတ်ကျမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ...
Samsung Galaxy J1 Ace SM-J111M ဖုန်းဗားရှင်း Andro...
ဆရာ၊ ဆရာမတွေကိုယ်တိုင် သင်ယူချင်စိတ် ရှိဖို့လိုတယ်...
မြန်မာ ၉ဝ၊ ခရစ်ယာန် ၆ နဲ့ မွတ်စလင် ၂ ရာခိုင်နှုန်းရ...
VSO ConvertXtoVideo Ultimate 2.0.0.25 Full + Patch...
FOLDER LOCK 7.6.1 FULL + KEYGEN FULL VERSION SIZE(...
MACHINES AT WAR3RTS V1.0.1 [APK+DATA(OBB)]
Wiko ဖုန်းတွေအတွက် Stock ROM တွေကို လိုအပ်သူများအတ...
GOOGLE PLAY STORE မပါဝင်တဲ့ CHINA ဖုန်းတွေအတွက် (သ...
*** အသုံးများသော အတိုင်းအတာများ***
ယူနီကုဒ်မြန်မာစာစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုမှုများ ...
Let's speak English for forbidding.
English Speaking Basics (26) အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခြေခ...
English Speaking Basics (19) အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခြေခ...
English Speaking Basics (25) အင်္ဂလိပ်စကားပြောအခြေခံ...
" နှစ်လုံးတွဲ စကားတိုလေးများ "
Noun (နာမ်) countable noun နှင့် uncountable noun ...
this morningနှင့်ပတ်သတ်သော ရှင်းလင်းချက်နှင့်အဖြေမ...
English Speaking Basics (28) အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခြေ...
Asking for forgiveness (ခွင့်လွှတ်ရန် ပြောခြင်း)
English Speaking Basics (29) အင်္ဂလိပ်စကားပြောအခြေခံ...
၀ါဆိုလပြည့်နေ့ + ဓမ္မစင်္ကြာနေ့
ပိုးကုန်းရွှာ ဘုတလင်မြို့နယ် ရဲတောဓလေ့ဆန်ဆန်မြန်မာ့...
♪ ICT သင်တန်းနှစ်မျိုးကို အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင် ♫
MYANMAR RINGTONE (မြန်မာသီချင်းသံ (၄၂) ပုဒ်)
16.07.2016 ထိုင်းချဲကြီး ၇၆၄ ထွက်သွားပါပြီးး
✿ ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူရခြင်းအကျိုးနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အ...
လက်မထပ်ခင် မေမေက သမီးကို ပြောတယ်။ လက်မထပ်ခင် ဖေဖေက...
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဆင်းခွန် အထူးယာယီ နယ်စပ်ဂိတ်မှ မြန်...
Lava Official Firmware Big Collection (One Clickြ...
PHOTOSHOP အတွက် WEDDING DVD COVER TEMPLATE
♪ MPT က DATA အပို နှစ်ဆထပ်ဆောင်းပေးမည့် လစဉ်အင်တာန...
♪ FACEBOOK က MESSENGER မှာ ENCRYPTED စွမ်းရည်ထည့်သ...
***It Depends on U***
သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် တရုတ်စစ်တပ်ကို အသင့်ပြင်ထားရန် အ...
ညအချိန် ပုန်းလျိုးအိမ်ကျော်နင်းသည့်သူခိုး တိုက်အပေ...
PROGRAMMING လေ့လာနေသူတွေအတွက် OOP IN C++ (OBJECT-O...
MOBILE ဖုန်းတွေမှ အင်တာနက် AUTO ပွင့်နေခြင်း၊ AUTO...
တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု ဖိလစ်ပိုင်...
သတင်းသမားကို အသရေဖျက်မှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
အနန္တော အနန္တ ၅ပါး
ဒွေး ကွယ်လွန်ရသည့် အကြောင်း မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင...
TT FONTCHANGER (ROOT)
မော်လမြိုင်မြို့တွင် မကြာမီ အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် ရွေဘ...
♪ သင့်ရဲ့ ANDROID GALLERY မှ ဓါတ်ပုံ ALBUMS များကိ...
ထိုင်း-မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး မြှင့်တင်မည်
စမွတ်ပကန်တွင် ထူးဆန်းသော မြွေသေကောင် ၅သိန်းတွေ့ရှိ...
Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F ဖုန်းကို Custom Re...
ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ကို ဆန္ဒပြ
Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F ဖုန်းဗားရှင်း Andr...
MOBILE SOFTWARE ONLY ပိတ်၇က်မရှိ ရက်တိုသင်တန်း တက်...
မြန်မာတနိုင်ငံလုံး သစ်ထုတ်မှု ၁ နှစ်နားမယ်
လူနာတင်ယာဉ် ကုက္ကိုပင်ဝင်တိုက်၊ လူနာစောင့် သေဆုံး ၊...
ဆိုင်ကယ်ဝယ်ရန် ပိုက်ဆံတောင်းမရ၍ ပိုးသတ်ဆေးသောက်သေဆ...
ANDROID 6.0.1 MARSHMALLOW FIRMWARE FOR GALAXY NOTE...
MTK ဖုန်းတွေကို IMEI ပြန်ရေးချင်တဲ့သူတွေအတွက် [MTK...
မွန်ပြည်နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်က သာယာလှပတဲ့ "ဘင်ဂလန...
Facebook က အသုံးပြုသူ၏ ဘာသာစကားအလိုက် Post များကို...
ALL SAMSUNG ANDROID 6.0.1 GOOGLE ACCOUNT /REMOVE (...
♪ OCULUS CEO ရဲ့ TWITTER အကောင့် ဟက်ခံရပြန်၊ လေးနှ...
♪ SPD PATTERN & PIN LOCK REMOVE ( NO ROOT , NO DEB...
♪ " အိုင်တီလောက၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး B...
SAMSUNG GALAXY ALPHA MODEL အားလုံးအတွက် ROOT ဖေါက်...
ADS VIRUS ကြော်ငြာများပျံ့နှံ့လာခြင်း နှင့် ကာကွယ်...
Samsung Galaxy J7 2016 ဖုန်းများအတွက် Android 6.0....